Koety: Herisetran’ny mpitandro filaminana azo horonantsary? · Global Voices teny Malagasy
Koety: Herisetran'ny mpitandro filaminana azo horonantsary?
Voadika ny 24 Oktobra 2010 14:31 GMT
Voarakitra horonantsary ny herisetran'ny mpitandro filaminana manerana ny tany. Indro misy iray avy any Koety izay navoaka tao amin'ny blaogy fanta-daza iray ary nahazo fanehoan-kevitra maro dia maro – ny ankamaroan'izany dia manameloka ilay mpitoraka blaogy noho ny namoahany izany.
Mark, avy amin'ny 248am, dia namoaka ity horonantsary manaraka ity:
Hitako tamin'ny Youtube ity horonantsary ity, izay toa misy mpitandro filaminana Koesiana midaroka Iraniana mpivarotra zava-mahadomelina tao amin'ny seranan-tsambon'ny Doha. Tena ratsy dia ratsy ny kalitaon'ny horonantsary ka sarotra ny hanamarina fa tena mpitandro filaminana Koesiana ireo, sy ny hoe tena tany amin'ny seranan-tsambon'ny Doha. Nanao akanjo miaro amin'ny bala, tena mitovy amin'ny an'ny mpitandro filaminana any an-toerana anefa ireo mpitandro filaminana tao anaty horonantsary. Tsy fantatro mihitsy koa na vao haingana na tsia io horonantsary io.
Maneho hevitra i Tariq:
Sarotra be ny miteny hoe inona no inona fa ny sary lehibe eto dia ny hoe “HERISETRAN'NY MPITANDRO FILAMINANA” na aiza na aiza, tsy ao an-toerana ihany fa afaka mijery ny youtube ianao dia ho hitanao ny manerantany
Mahita i Frankom fa tsy azo ekena izao fomba fitondra izao ary manamarika:
بغض النظر اذا كانوا قادمين الكويت تسلل أو معاهم مخدرات أو أي شيء آخر
المفروض يتعاملون وفق القانون
Na eo aza ny hoe niditra tsy ara-dalàna tao Koety izy na nanana zava-mahadomelina tany aminy na zavatra hafa, tokony mba nofaizaina araka ny lalàna ry zareo.
Ary i q80 kosa nanaitra fanontaniana maro:
1.Tsy mazava ny horonantsary sady ratsy kalitao.
2. Tsy azonao hamarinina fa Koesiana ireo polisy ireo.
3. Tsy azonao hamarinina fa tany amin'ny seranan-tsambo Doha io no nitranga.
4. Tsy fantatra na vao haingana io na efa taloha.
5. Tsy azo hamarinina fa Iraniana ireo.
Dia aleo ary odiana atao hoe polisy Koesiana midaroka Iraniana ireo, tsy fantatsika ny anton'izany. Mety hoe nivarotra zava-mahadomelina ry zareo. Mety hoe tsy nanaraka ny baikon'ireo Koesiana ry zareo, dia ny hanolo-tena sy hilaza ny mombamomba azy. Mety hoe niampita tsy ara-dalàna ny ranon'i Koety izy. Mety hoe nitifitra ireo polisy Koesiana.
Mandritra izany i instantcravings manazava ny tranga maizina iray:
Ity polisy sy ny kibainy… na inona na inona nahatezitra azy… tsy te-hanao zavatra na ho eo akaikiny aho !
hafatra mazavazava kokoa….mety haniry hanana azy ho mpiaro ny sasany amin'ireo tranombarotra lehibe!
Dia manontany i Bu Yousef:
‘Raha tena mpivarotra zava-mahadomelina izy, aiza ho aiza amin'izao no herisetra?
Manaiky i Abdulla:
Raha fintinina, dia mety amin'ny mpivarotra zava-mahadomelina avokoa ny zava-drehetra. Mahafaty ary manimba aina sy fianakaviana maro ny zavatra amidiny.
Antsoy hoe herisetra izany, antsoiko kosa hoe fijinjàna ny nafafy.
Nefa miangavy ny hanavahana izany i Burhan:
Tsy fomba hanatsaharana ny fivarotana zava-mahadomelina ny fidarohana mpivarotra zava-mahadomelina. Tsy hoe hanakana ny olona hampitombo ny entana akory ianao, na hanakana ireo bandy mandoa vola aminy mba hihinana zava-mahadomelina.
Tsy haiko hoe nahoana ny olona no mihevitra fa hevitra tsara izao. Dia avy eo ahoana? Hidaroka ireo mpandray zava-mahadomelina?
Tsy misy olona afaka manery ny hafa handray zava-mahadomelina. Araka ny voalazan'i Chris Rock, “Tsy mivarotra zava-mahadomelina akory ny mpanondrana zava-mahadomelina, fa manome.” Ny tokony ataoao dia ny mandà.
Mieritreritra aho fa sarotra loatra izany ho an'ny olona – ka izao isika miafara amin'ireo voalaza ho mpitandro filaminana nidaroka “mpivarotra” zava-mahadomelina izao
Nahazo teny mahamay avy amin'ny mpamaky azy ihany koa i Mark noho ny famoahany ilay horonantsary.
Manoratra i Taz:
Efa tsapako hatramin'izay fa tia mizara na mitondra zava-dratsy ho an'i Koety sy ny vahoaaka i Mark… tahaka ny polisy koesiana mamo ka mandihy, izay tokana anatin'ny iray tapitrisa, sy zavatra hafa maro izay manaratsy antsika.
Ary manoro hevitra i bu ziad:
tsara raha manalavitra ny lahatsoratra izay mety hiteraka fihetsiketsehana ianao noho ireo olana ara-piarahamonina sy ara-politika. Torohevitry ny namana ihany iny fa malalaka ianao hanoratra izay tianao.
Mamaly izany i Just:
Tsy haiko hoe iza no tena ratsy, ny polisy ao anatin'ny horonantsary ve sa ny olona miteny hoe tsy tokony navoaka ity noho ny mahasarotiny loatra ny kolotsaina?